AIZA NO ALEHA
31/03/2017 admintriatra 0
Telozoro – Andrefan’Ambohijanahary Tarika iray nanana ny lazany teo amin’ny tokontaniben’ny rock malagasy. Hanokatra ny faha-30 taonany ny tarika Green ary hanolotra fampisehoana miavaka anio alina etsy amin’ny Telozoro Andrefanambohijanahary. Fotoana hifankahitana indray amin-dry Jacquot …Tohiny
Kolontsaina sy fanatanjahantena : Raikitra ny fifaninanana « Hazakazaka posiposy »
Ao anatin’ny fanomezan-danja ny asa fitarihana posy izay sady kolontsaina no mampiavaka an’i Madagasikara amin’ny firenena hafa, raikitra ny fifaninanana « hazakazaka posiposy », izay handraisan’ireo mpitarika posy anjara amin’ny kaominin’Ambatolampy, Ambositra ary Antsirabe. « Hazakazaka posiposy Mampiray …Tohiny
Ny orinasany aloha
Tsy nisy tsy nitabataba noho ny hamaroan’ny lavadavaka manerana ny araben’Antananarivo Renivohitra ny mpampiasa lalana. Vao miresaka hoe Antananarivo Renivohitra dia ny Cua no tompon’antoka ny fanamboarana an’izany. Ny eny 67 ha moa no tena …Tohiny
Tabera Randriamanantsoa : Te hitondra firenena mafy nefa tsy afaka
Mirefarefa amin’ny tany ny fomba fisainana. Izay no azo andikana ny fomban’ny mpitarika ny Kaonfederasion’ny federalisma (Cnef), Tabera Randriamanantsoa. Toa mivazavaza tsy amin’ny antony ary tsy hampandroso firenena akory ny tanjony. Toa ny hampikorontana ny …Tohiny
Filoham-pirenena tany Antsiranana : « Ny tsirairay no mila mandray an-tanàna ny fampandrosoana ”
«Tsy ny olona any ivelany no antsointsika hampandroso ny firenena ». Ampahany tamin’ny resadresaka nifanaovan’ny filoham-pirenena malagasy, Hery Rajaonarimampianina, tamin’ny mpanao gazety io raha niatrika hetsika maromaro tany Antsiranana izy ny herinandro lasa teo. Laha-teny izay ...Tohiny
Banky Iraisam-pirenena : Afa-po amin’ny ezaky ny governemanta malagasy
Filoha Hery Rajaonarimampianina:DOCTEUR HONORIS CAUSA
Ambohidahy Anosy : Nandoro fiara ireo mpanao fihetsiketsehana
Rajoelina / TGV / MAPAR : Hanao amboletra haka Fanjakana